Inde: Ny hazakazaka amin’ny vahaolana ara-toetrandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2018 6:23 GMT
Efa telo herinandro sahady izay no namakiako tao amin'ny diarin'i Tom Friedman, tao amin'ny New York Times [ amin'ny teny anglisy avokoa ireo rohy rehetra], fa tovovavy roa mpianatry ny oniversite amerikana no nanao misiona mahagaga tao India. Nitety izao tontolo izao tamin'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, angovo avy amin'ny masoandro, [la Reva] i Alexis Ringwald sy Caroline Howe mba hanintonana ny saina amin'ny fiovana ara-toetrandro ao amin'ilay soba-kaontinanta indiàna goavana. Mankahery ireo tanora sy ireo rehetra vonona ny hanavao amin'ny fampiasana loharanon'angovo madio kokoa, maintso, ary manaja kokoa ny tontolo iainana izy ireo. Tena gaga tamin'ny hetsika nataony aho ary nanapa-kevitra ny hizara ny tantarany. Misy blaogy, lahatsary, sary, vaovao mikasika ny toetrandro ao India, ary maro hafa koa ny vavahadin-tseraseran'izy ireo India climate Solutions :
Eto no rohy ahitàna ireo fiara telo Reva mandeha amin'ny herinaratra
Tamin'ny fanombohana ilay hazakazaha, nanoratra i Caroline :
Mba hahazoana vaovao momba ilay dia sy hahitana ohatranà lahatsary tsotra be, jereo ny lahatsarinay voalohany ”Climate solutions”, miaraka amin'ireo tafatafa voalohany nataonay mikasika ny fiara mandeha amin'ny herinaratra sy ny dia voalohany nataonay niaraka tamin'ny fiara Reva. Mankahery ireo tanora izahay mba hanao [itony karazana lahatsary itony] momba ireo vahaolany manokana, hevitra tena kidaladala ananany, ny heviny mikasika ny fiovana ara-toetrandro. Voafetra amin'ny lahatsary manana faharetana 1.5 minitra izahay mba hahafahana mandray anjara amin'ilay fivoarana nataon'ny Google, ReCharge IT, mikasika ny lohahevitra ”Fa maninona aho no te-hamily fiara mandeha amin'ny herinaratra ” , saingy mihevitra aho fa ohatra amin'ny fomba hahafahan'ny fifaninanana lahatsary hanome aingam-panahy amin'ny famoronana sarimihetsika vaovao mikasika ny zavatra tianay atao izany.
Manoratra i Alexis :
Tamin'ny andro fahefatra aho vao tonga saina tamin'ny hasarobidin'ny zavatra ataonay. Ny 3 Janoary 2009, natomboky ny vondron'olona mazoto iray ny hazakazaka ho an'ny vahaolana ara-toetrandro, dia fitetezana 3 500 km mandritra ny iray volana, avy any Chiennai ka hatrany New Delhi, ao India mba hanaporofoana fa misy ny vahaolana amin'ny fitaterana madio ary handresena lahatra ireo mpanamboatra fiara manerana ny tany mba hamokatra ireto farany amin'ny andiany maromaro.
Tamin'ny andro fahefatra tamin'ity dia ity, ny 7 Janoary, tena azoko fa namboly voana revolisiona izahay tamin'ity ”Hazakazaky ny fiovana” ity.
Manoratra i Anna Da Costa , iray amin'ireo mpanohana ny tetikasa:
Ny rano mafana azo avy amin'ny masoandro no iray amin'ireo vahaolana tsotra sy mahomby indrindra hitanay nandritra ny fiampitantsika ny soba-kaontinanta indiana
Nahita ohatra iray izahay teto Udaipour, tanàna feno farihy sy lakandrano, lapa fahiny, lavarangana feno saritigetra sy làlana mangina.
Tsotra dia tsotra ny fomba hanaovan'izy ireo izany : manafana ny rano ny mpanangona hafanana iray fotsiny (ireo takela hitanao), ao anatina akora mpampita herinaratra toy ny vy, ao anatina taho mijadona amin'ny masoandro, amin'ny alalan'ny andiana fantsona kely izay tonga dia mifandray amina toeram-panangonana rano voadidina akora tsy mandray herinaratra, ka ao no hanangonana ny rano mafana. Rehefa mafana avy amin'ilay fanangonana ny rano, dia tonga dia mikoriana amin'ny alalan'ilay fisampatsampanana izy, sady mitazona fikorianan-drano manerana ilay rafitra iray manontolo, mba hafana tsy miova ilay izy.
Anisan'ireo fomba ntaolo indrindra -ary tena mora vidy indrindra – mba hahazoana rano mafana any amin'ireo firenena mafana ity ary afaka manome hatramin'ny 85-100% amin'ny rano ampiasain'ny tokantrano iray. Mahangona eo amin'ny 11.1 barikanà solitany isantaona eo ny fanangonana tsotra 50 galona (190 litatra) rehefa mifanakalo toerana amin'ny rano mafana amin'ny alalan'ny herinaratra.
Vao haingana, nandray ilay ekipa tao an-tranony i ramatoa filohan'i Inde. Mitantara i Alexis:
Nanana tombony tsy nampino izahay voaasa hihaona tamin-dRtoa filoha Patil, ilay Filoha mendri-piderana ao India, tao amin'ny trano fonenany tao Rashtrapati Bhavan ! Ten liana tamin'ny hazakazaka ho amin'ny vahaolana ara-toetrandro nataonay izay ary manohana ny ezaka ataonay ho amin'izany fanaovana izany izy. Antenainay fa hahatsikaritra ireo tanora avy ao amin'ny firenena misy azy ka mihetsika manoloana ity olana ity ireo filoham-panjakana rehetra manerana ny tany !
(Nanome ny sary: India Climate Solutions)